မေဖန်ဆင်းတဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်: ပန်းကလေးတွေ အကြောင်း
Posted by မေ့သမီး at 6:11 PM
ဥယျဉ်မှူးငါ့ညီမရေ...အစ်ကို သဘောတူပါတယ်..ပန်းလေးတွေ ဆက်စိုက်ပါ..
တခြားဥယျာဉ်တွေဆီလည်း မွှေပါ ပတ်ပါ ရေလိုက်လောင်းပါ..စိတ်တိုပြီးတော့ တော့ ပြန်မလာနဲ့..:P
ကိုယ်က စံတစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားပြီး သူကအဲဒီလိုရေးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်...
သူကလည်း သူဖတ်မိ မှတ်မိသလောက်ကိုပဲ ရေးတာဖြစ်မှာပေါ့။ သူ့ အသက်အရွယ် သူ့ အသိကလည်း ကိုယ်နဲ့ ကွာချင်ကွာမှာပေါ့...
သူသူကိုယ်ကိုယ် စိတ်ထဲရှိတာချရေးကြတာချင်း အတူတူ စိတ်မဆိုးရဘူးလေ...
လုပ်စရာရှိတဲ့ စာတွေသာ ဆက်လုပ်ပါ။ စာမေးပွဲပြီး တော့မှ ပြန်လာခဲ့...
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ဥယျဉ်လေးတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာပါစေကွယ်.. သူစိုက်ထားတဲ့ပန်းကို မကြိုက်ရင် မခူးရုံပေါ့ကွယ်..
မေ့သမီးရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဥယျဉ်လေးမှာ ပန်းလေးတွေ မျိုးစုံ လှပသာယာစွာ ဖူးပွင့်အောင် ရေလောင်းပေါင်းသင်ပေးနိုင်တဲ့သူ အမြဲဖြစ်ပါစေကွယ်..
ဒါက ဒီလိုရှိတယ် ။ ဟိုဟာက ဟိုလိုရှိတယ်ကွဲ့။ ဒီတော့ ဒါတွေကို ဒီလိုပဲ သဘောထားလိုက်။ ဟိုဟာတွေကို ဟိုလိုသတ်မှတ်လိုက်။ သူ့လမ်း သူလျှောက်၊ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်လျှောက်ကြတာပေါ့ကွယ်။
ဘလော့ဂါပန်းဥယဉ်ကြီးထဲမှာ အရောင်သွေးစုံတဲ့ ပန်းလေးတွေပွင့် နေကြတာ ၀မ်းသာပိတီဖြစ်စရာပါ၊ ငါ့ညီမ တွေးတာလေးက လှတယ်၊ ပန်းလေးတွေအားလုံးလှကြပါတယ်၊ လောကကြီးက ချစ်ခြင်းတရားနဲ့သာ ကြည့်တတ်မယ်ဆိုရင် အရာရာအားလုံးဟာ လှပနေတာပါဘဲ ညီမလေးရေ။ လောကကြီးကို ချစ်ခြင်းတရားနဲ့သာ ကြည့်ပါ ....။
ဥမပါ.. အဲ.. ဥပမာလေးတွေကောင်းသားပဲဂျ.. ရေးတတ်တယ်.. ဟုတ်လည်းဟုတ်နေတယ်..
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေ.. ဟီဟိ.. (ဒါနဲ့ ဟိုလူကိုသိချင်သား)
ဥယျာဉ်မှုးတယောက်အနေနဲ့ ကိုယ်စိုက်တဲ့ပန်းကို ရှင်သန်ပွင့်လန်းအောင် ရေလောင်းပေါင်းသင်ရမှာပေါ့
ဥယျာဉ်မှုးညီမလေးရေ၊ ဥပမာ ပေးတာလဲ ကောင်းတယ် ၊ စာရေးတာလဲ ကောင်းတယ်၊ အမလဲ တူတူပါဘဲ ကိုယ်က ကိုယ့်ခံစားချက်လေးတွေ၊လွမ်းနေတာလေးတွေ စိတ်ထဲဖြစ်နေတာလေးတွေ ချရေးတာလေ၊ ဥယျာဉ်တိုင်းဟာ တမျိုးနဲ့ တမျိုးတော့ မတူဘူးပေါ့ ညီမရေ၊ ညီမ ဥယျာဉ်ထဲ ကို အမြဲရောက်ပါတယ်၊ အမြဲအားပေးနေပါ့မယ်၊
ဘလော့တစ်ခုကို ပန်းဥယျာဉ်တစ်ခုနဲ့ ဥပမာပေးပြီး၊ ဘလော့ရေးတဲ့ သူတွေကို ပန်းဥယျာဉ်မှုးနဲ့ တင်စားသွားတာလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ဘလော့ရေးတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်တွေးမိတာကတော့ ကျွန်တော်တို့က professional စာရေးဆရာတွေမှ မဟုတ်ပဲဗျာ .. အမြဲတမ်းတော့လည်း သူများအားကျစရာ သဘောကျစရာ စိတ်အဆာပြေနိုင်စရာချည်း ရေးနိုင်ချင်မှလည်း ရေးနိုင်မှာပေါ့ ... လူတစ်ယောက်ကို ခံယူချက်တစ်မျိုးဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ဘလော့က ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခု ဖြစ်သင့်တာလည်း အမှန်ပါပဲ .... သူများကို တင်ပြဖို့ချည်း စိတ်ကူးပြီး လုပ်နေရင် ဘလော့ရေးတာက စိတ်ထွက်ပေါက် တစ်ခု ဖြစ်မလာတော့ပဲ ကိုယ့်ကို pressure ပေးတဲ့ နေရာကြီး ဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့ ... မေ့သမီး ပြောတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဥယျာဉ်တိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ လည်ပတ်ဖြစ်ချင်မှ လည်ပတ်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဥယျာဉ်တိုင်း လှပနေစေချင်တာကတော့ အသေအချာပါပဲ ... နောက်ဆုံးပြောခဲ့ချင်တာကတော့ မေ့သမီးပြောခဲ့တဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ " ဘလော့ပန်းကလေးတွေ ဒီထက်ပိုပြီး အရောင်အသွေးစုံ၊ ရနံ့တွေစုံလာပါစေ၊ ပန်းပျိုးသူတွေလည်း ပိုပြီးများပြားလာပါစေလို့ကျွန်တော်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဆုတောင်းမိပါတယ်။ " ကိုယ်နဲ့ ထပ်တူမကျ၊ စိတ်အခန့်မသင့်ဖြစ်စေတဲ့ ဘလော့တွေကိုတော့ မေ့ထားလိုက်ပါဗျာ ... ကိုယ်ရပ်တည်နေတဲ့ ဥယျာဉ်လေးမှာပဲ စဉ်ဆက်မပြတ် လှပနိုင်အောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ့်အပေါင်းအသင်း ဥယျာဉ်မှုးတွေနဲ့ ဝေဆာတဲ့ ပန်းသိုက်မြုံတစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါ .... မေ့သမီးရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ လွတ်လပ် အေးမြနေဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
အင်း.. အပေါ်ကလူတွေ ပြောသွားတာ အတော်ပြည့်စုံနေပါပြီဗျာ။ ဘာဆက်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ပွင့်သောပန်းတိုင်း မွှေးပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အယူအဆမတူ အမြင်မတူတာတွေကိုတော့ လွတ်လပ်စွာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကွဲပြားနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။ လောကကြီးအတွက် အဆိပ်ပန်းမဖြစ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ အဆိပ်ပန်းတွေကိုတော့ ဝေးဝေးရှောင်ပေါ့နော့။
မေ့သမီးကိုတော့ကြားဖူးတယ်ကျောင်းမှာတုန်းက။ ဘလော့ကိုတော့တခါမှမရောက်ဖူးပါ။ မှော်ဘီGTCကထင်တယ်နော်။
ဒါဆို ကိုယ်လဲ ဥယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ပေါ့နော် ။ဥပမာလေးကို သဘောကျပါတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ရေးတာမှို့ အမြဲရေးတာတွေက ကောင်းမနေနိူင်ဘူးပေါ့နော်... ဒါပေမဲ့ ပရိတ်သတ်ကိုတော့ အဆိတ်အတောက်မဖြစ်စေဘူးလို့ထင်တာပဲလေနော် ...
ရေးတာလေးတွေ ကောင်းပါတယ်။ ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ် ...
မေ့နေလို့ ... အစ်ဘလော့မှာ လင့်ထားတယ် ... ခွင့်ပြုပါနော်
အာလုံးကောင်းပါ၏ ညံ့နေတာ ကချင်ကြီးပါ၊ စာမေးပွဲ ဖြေနိုင်ပါစေ၊ ဟိုလေ ..စာမေးပွဲခန်းထဲ ပေတံ မေ့မကျန်စေခဲ့ နဲ့နော် အဟေ...ဟေ...? ? ?
မေ့သမီးပေးတဲ့ ဥပမာက ကောင်းပါတယ်ကွယ်။ ပြန်လိုက်မလာဘူးလို့ထင်မှာစိုးလို့ ပြန်လိုက်လာပါတယ်နော်...
လာလည်ပြီး ကွန်မန့်တွေပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိုက်ထားတဲ့ ပန်းပင်လေးတွေကို ရှင်သန်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ခက်တယ်နော်... အချိန်အကြာကြီး ဒီပန်းပင်လေးကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ပါစေ.. ရောင်စုံပန်းတွေလည်း ပွင့်ဖူးပါစေ
အမရေ ဥပမာပေးလေး ကောင်းပါတယ်။
စာတွေလည်း အားရင် ရေးပါဦး . လာလည်ပြီး အသစ်ရှာသွားပါသွားတယ် .. အဟောင်းတွေကိုလည်း ဖြေးဖြေးချင်း ပြန်ဖတ်ရဦးမယ် .. အဆင်ပြေပါစေ
အဲဒီ ဘလော့လိပ်စာလေး ပေးပါဦး.. ဗဟုသုတရအောင် သွားဖတ်ချင်လို့.. ဘလိုလုပ်ရပါ့ :D
ကလူသစ်ပြောတာ ပဲ ။ လာလာ.. တို့လမ်းတို့လျှောက်ကြတာပေါ့။
ဥပမာလေး အရမ်းသဘောကျပါတယ် ..
အားလုံးပြောသွားသလိုပဲ .. ကိုယ့်ဥယျာဉ်လေးထဲမှာ ကိုယ်ပျော်တယ် .. ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ပန်းလေးတွေစိုက်မယ် .. ဝေဆာနေအောင်တော့ တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားနေမှာပါပဲ .. ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော် ..း)